Microweber: yakanyatso kukwana zvemaneja maneja | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchitsvaga imwe nzira kune CMS (Zvemukati Management Sisitimu) inonyanyo kuzivikanwa, ndiko kuti, kune zvemukati mamaneja akadai seWordPress, Prestashop, Drupal, Joomla, nezvimwe, pano isu tinopa inonakidza kwazvo uye yakakwana sarudzo. Iyo yakavhurika-sosi yezvinyorwa maneja, senge iwo ataurwa pamusoro. Pamusoro peCMS, zvakare inovaka anovaka mawebhusaiti nenzira iri nyore uye yakavakirwa pamutauro wePHP uye mutauro weLaravel 5.
Shandisa kudhonza uye kudonhedza uye bvumira vashandisi kuti vagadzire zvemukati nekukurumidza uye nyore. Saizvozvo, ine huwandu hukuru hwemabasa, saka zvinonzwisisika kumisikidza chitoro chepamhepo, webhusaiti yebhizinesi rako kana blog. Tinotaura nezvazvo microweber. Iri kutoshandiswa nemamwe mawebhusaiti emasangano nemakambani, saka mhedzisiro yacho inyanzvi. Kana iwe uchida kutanga izvozvi, unogona kuwana iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Iyo saiti yakatangwa muBeta fomu muna Kubvumbi 2015 muSofia, Bulgaria uye zvishoma nezvishoma yanga ichikura mukuvandudzika uyezve nenhamba yevashandisi vanovimba nayo. Kutanga kwakazvigadzira chave chimwe chevakakurumbira munyika yeEurope uye vakatove pakati pe 100 inonyanya kufarirwa muEurope uye kuhwina mubairo. Uye kana iwe uchida kuziva kuti sei, ikozvino tichaona zvimwe zveMicroweber maficha:
Rarama gadziriso, unogona kushanda zvakananga nechemberi-kumagumo kwewebsite.
Dhonza & udonhedze, kuwedzera zvirimo kana zvinhu zviri nyore nekukanya mbeva.
WYSIWYG HTML Edhita, HTML kodhi mhariri iyo inokuratidza iwo chaiwo maonero iwe uchishanda nawo.
Online store, chitoro chepamhepo chakavakwa nekukurumidza, ine sarudzo dzekuratidzira stock, system yekubhadhara, nezvimwe.
Statistics kuwana ruzivo nezve zvese zvinoitika pawebhusaiti yako.
Templates kugadzirisa dhizaini uye zvimwe zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Microweber: yakakwana kwazvo zvemaneja zvemukati